T-2700 Yekutakura Wiricheya Inotsemuka Armrest - Karman Healthcare
Iyo T-2700 Yekutakura Wiricheya
Iyo T-2700 Yekutakura wheelchaiarf from Karman Healthcare inoratidzira inokwenenzverwa tafura kureba mawrestrests, bvisika swing-kure tsoka, tsoka dzakaputirwa inofema nylon upholstery uye 8 ″ x 1 - solid casters. Ivo kiyi ficha pano kugona kuchinjisa zvirinani. Maoko anongobudikira ipapo. Unogona kusarudza kuruboshwe, kurudyi, kana zvese zviri zviviri. Inoita iri nyore chaizvo kushandisa uye inoshanda zvakanyanya. Tarisa uone mamwe macheya ane izvi maficha anodhura nenzira yakawanda.
Iyo furemu inogadzirwa kubva inogara isina huremu simbi uye inouya mune inoyevedza poda yakasviba yakaputirwa kupera. Inouya yakajairwa nekwakabaya tambo yechigaro.
SKU: T-2700 Categories: Wiricheya isingaremi, Kutakura Mawiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Inosvikika armrests w / mativi emapaneru
Yakapetwa w / kupeta backrest
Kurema kwe 29 lbs. w / chinzvimbo che250 lbs.
Swing-kure, inogadziriswa kureba inodzikika tsoka tsoka ine chitsitsinho zvishwe
Pakazara Hupamhi Hupamhi 25 3/4 inch., 27 3/4 inch.
T-2700 Kutakura Wiricheya UPC #
24 × 11 × 32 mukati